Kutsvaga Mapfupi, bhuku rekutanga pane Mapfupi, izvozvi rave kuwanikwa paBooks neAmazon [SWEEPSTAKES] | IPhone nhau
Kutsvaga Shortcuts, rekutanga bhuku paShortcuts, rave kuwanikwa paBooks neAmazon [SWEEPSTAKES]
louis padilla | | iTunes, dzakawanda
Iwo mapfupi akambove apfuura uye mushure mekushandisa kweSiri. Yakaburitswa neIOS 12 Kwave kuri kunzwa chaiko kune avo vaida kuwana zvakawanda kubva kune chaApple mubatsiri, sezvo ichitendera iwe kuti uite mabasa neSiri izvo zvisingaite natively. Kunyangwe otomatiki mabasa sekushandura mifananidzo zvinogoneka nemaPfupi.
Teerera kune redhiyo pane iyo HomePod? Fungidzira iyo yekutenga zvinyorwa kune yako iPhone? Batidza Apple TV kubva kune yako HomePod? Mikana yacho haigumi, uye nebhuku nyowani "Kutsvaga Mapfupi" achangoburitswa paBooks neAmazon, iwe uchave nazvo zviri nyore kwazvo.
Mugari wenhaka weWorkflow app, iyo Shortcuts app yakaonekwa padivi peIOS 12 inopa mikana isingaperi yekuwana zvakawanda kubva kuna Siri. Mukushaikwa kweApple kupedzisa kuvhura yayo chaiyo mubatsiri kune vese vanogadzira, Mapfupi anokutendera iwe kuti ugadzire yako wega mafirifomu ekuita izvo zviito. Iko kunyorera kunosanganisira gallery ine dzimwe nzira dzinonakidza kwazvo, zvimwe zvinowirirana zvinoshandiswa zvakare zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti ugadzire mapfupi, asi ichi chinongova chikamu chidiki cheicho chinogona kuitwa, nekuti iwe unogona kuzvigadzira iwe pachako, kunyangwe izvo zvichida hushoma ruzivo kuti ne «Kutsvaga Mapfupi» iwe uchawana nekukurumidza.
Kutsvaga mapfupi eIOS ndiro bhuku rekutanga paPfupi kuburitswa mune chero mutauro. Iyo inhanho kumberi mune yekudzidzira kupihwa mapfupi ayo anoumbwa nezvimwe zvinyorwa pamablog uye apuro rubatsiro paapp.
Yakanga ichishaya tambo yakajairika yaisunga zvese pamwe chete, nzvimbo yekudzidza nemienzaniso yakatungamirwa, uye gwaro rekunongedzera kumitauro uye matekinoroji ane chekuita nenzira pfupi. Uye ndiro iri bhuku, ibhuku rekudzidza uye bhuku rezita apo neimwe gadziriso isu tichawedzera zvirimo kuitira kuti pave nezvose zviripo nezvePfupi
Nayo tinotarisira kuunza mikana yeZvipfupi kune avo vanhu vasina ruzivo rwechirongwa asi vachida kudzidza uye kuwana zvakazara mazviri. Asi isu takafunga zvakare nezve avo vakatowana ruzivo uye vanoda kuusimbisa nekuuwedzera kusvikira vaita mapfupi akaomarara zvechokwadi.
Yakagadzirwa naFrank Liñán, Rafael Roa naJosé Ruiz, bhuku iri ndere rekutanga kuburitswa paMapfupi, uye rinovimbisa kubudirira chaiko. Mutengo wacho i € 8,99 uye unogona kuzvitenga zvese muBooks (link), kuti unakirwe nayo pane yako iPhone, iPad uye Mac, senge paAmazon (link) kuti uverenge pane yako Kindle. Iyo iBooks vhezheni inosanganisira mavhidhiyo, saka ndiyo inonyanya kukurudzirwa. Kutenda kune vanyori vayo isu tine marezinesi matatu emahara eBooks aunogona kuwana nekugovana chinyorwa ichi pa twitter ne hashtag #descub Friendoshortcuts uye chinongedzo zvacho. Une kusvika Ndira 5, 2019 na23: 59 pm
Tweet #descub Friendoshortcuts
Vakahwina dhirowa vanga vari (zita rezita reTwitter): @superluis, @jlaznar, @deckfp
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Kutsvaga Shortcuts, rekutanga bhuku paShortcuts, rave kuwanikwa paBooks neAmazon [SWEEPSTAKES]
Halil abel akadaro
iyo link yekugovana haishande
Pindura kuna Halil Abel
uye anokunda ndiye?
Pindura kune lologan
Gore idzva, zvigadzirwa zvitsva? Chii chiri 2019 chakachengeterwa isu?
Yakanakisa Apple inotangisa ya2018